Ofzọ nke ịkwụ ụgwọ nke azụmahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Paymentgwọ nke azụmahịa kọmputa
Otu n'ime akụkụ ndị bilitere, ma ndị ọrụ ma ndị ọrụ nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị, bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na ngwaahịa ngwaahịa ha nwere ike ibute site na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ ha. N'ihi na ha dị ọtụtụ ma dị iche iche n'okike, dịka a ga-ahụ n'okpuru.
Ebee ka aghaghi ime ka ihe di nkpa banyere ulo oru a di iche iche. Ma ọ bụ ya na-erite site n'eziokwu akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke azụmahịa e-commerce Ọ bụ n'ihi ịdị mfe nke onye ahịa ga-akwụ ụgwọ ahụ, ọ dị mfe, ka anyị ga-enwekwu mmasị n'ịzụ ihe. Ruo n'ókè na nke a bụ otu n'ime igodo ezi mmepe na azụmahịa kọmputa.
N'aka nke ọzọ, ọ ga-abụrịrị ekele maka oge a na enwere ụfọdụ ụzọ ndị ọrụ na-anaghị atụkwasị obi iji tinye nkọwa kaadị kredit ha na weebụsaịtị. Site na nke a, agaghị enwe ihe ọzọ ma ọ bụghị inye ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ usoro ịkwụ ụgwọ na-eweta nchekwa na ntụkwasị obi na arụmọrụ ha. Ọdịdị ha adịghị mkpa, ọbụnadị ọhụụ ha na nhazi ha na-enye site na ntanetị ha.
1 Nyefe akụ
2 Mentzọ ịkwụ ụgwọ: kwụọ ụgwọ Pal
3 Ego nkịtị na nnyefe
5 Pụrụ iche kaadị akwụmụgwọ
6 Akaụntụ maka SMEs n'ịntanetị
7 Ngwaahịa maka imepụta azụmahịa dijitalụ
Nkufe ego n’ụlọ akụ bụ otu ụzọ esi ebufe ego n’otu akaụntụ gaa na nke ọzọ. Ọ bụ ụzọ iji nyefee ego n'etiti akaụntụ akụ na-enweghị wepụ ego ahụ. Mgbe ị na-etinye iwu na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị site na nnyefe ego, a na-ezigara onye ahịa koodu iwu nke a ga-etinye na ya nyefe iwu.
Ebe ọ bụla, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ achọpụta nkwụnye ego na akaụntụ akụ ya ma gosipụta na ọ dabara na iwu dị ugbu a, ọ na-egosi akara dị ka ịkwụ ụgwọ wee ziga ahịa ahụ. Na-enyeghị nsogbu ndị bụ isi maka ojiji na mmekọrịta onye ọrụ yana ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Ebe otu n'ime uru ya kachasị dị mkpa bụ na ọ naghị emetụta ọrụ maka onye nyere iwu a n'ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ego.
Mentzọ ịkwụ ụgwọ: kwụọ ụgwọ Pal
Ọ bụ ụzọ nke ndenye aha nke na-ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya site na nnukwu nhọrọ n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa na klaasị ọrụ a. Site na nke a, ekwesịrị ikwupụta na PayPal bụ ụlọ ọrụ America nke eBay nwere, ọ bụrụla ụzọ nkwụnye ụgwọ zuru oke. Na mba ọ bụla Pay Pal na-eme omume ya, mana n'ozuzu ya na-enye usoro ndị a.
Na-arụ ọrụ na ego etinyegoro na akaụntụ PayPal. Na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ụlọ akụ, na-arịọ nkọwa kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụ nhọrọ nwere ike ịba ezigbo uru na azụmaahịa ọnlaịnụ, na nke a, ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dijitalụ na-anọchi anya ya. Ruo isi nke ichikota ihe di nma nke ihe ndi oru nke ihe ntanetị dijital a choro. Na ichekwa ego na kọmitii na mmefu ndị ọzọ na njikwa ya ma ọ bụ ndozi ya.
Ego nkịtị na nnyefe
Uzo ozo di na uzo ahia a di iche bu ndi nke ahia a. Na na egosiputara ya nke oma maka udiri ihe a, ihe odidi ha. N'ihi na a pụrụ ikwu na a kwụrụ ụgwọ ahụ ozugbo anabatara ngwa ahia. Ọ dị mkpa na a na-enyocha ngwaahịa ahụ tupu ịkwụ ụgwọ. Site na ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ a, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-ewepụta usoro iwu enyere ndị ahịa ahụ site na email yana nchịkọta nke usoro ha. Ọ ga-ezuru oke iji gboo mkpa ndị a.
Echefula na ọ na-abụkarị, izipụ ngwa ahịa maka ịkwụghachi ụgwọ gụnyere ụgwọ ọzọ ndị ụlọ ọrụ na-ebugharị na-akwụ ụgwọ. Ọ bụ mkpebi nke azụmahịa kọmputa iji chee na ọ ga-efu ma ọ bụ kenye ya ndị ahịa ikpeazụ. Site na uru ọzọ, n'ọnọdụ ụfọdụ, na ọ bụrụ na onye ahịa anaghị akwụ ụgwọ maka ngwa ahịa, anaghị enyefe ya. Bụ ihe nwere ike ịbara ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị a uru na-aga na ntanetị.
Ọzọkwa, nke a bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ mgbochi wayo akara nke ndi otu Sage nwere. N'adịghị ka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, nke a na-akwụ ụgwọ ego a na-akwụ kwa ọnwa gburugburu euro 30 ma na-enye ohere ka azụmahịa puku. Maka ọnụ ahịa dị elu karịa, oke a ga-abawanye. Iji bulie ọrụ ahụ, ọ dị ezigbo mkpa na site ugbu a gaa n'ihu a na-agbakọ site na data ịgba ụgwọ nke azụmahịa gị ka esi kesaa ego ahụ n'etiti azụmahịa niile kwa ọnwa iji nyochaa ma ọ dị ọnụ ala karịa ụzọ ndị ọzọ emere na mbụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ọhụrụ na avant-garde nke nwere ike ịbụ isi nkwado maka ndị nwe obere ma ọ bụ ọkara nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ha nọ n'ọnọdụ ịzụlite atụmatụ ha na ngalaba nyocha yana nke ahụ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ọdịmma ha. Karịsịa ụzọ ndị ọzọ a na-ejikarị eme ihe ma ọ bụ nke ọdịnala ị nwere ike iji mee n'oge a.
Pụrụ iche kaadị akwụmụgwọ
Ha bụ ngwaahịa akụ bara uru bara uru maka mkpa nke ndị ọkachamara esonyere na azụmaahịa kọmputa. Ihe owuwu ha bu na ha bu acego ndebanye aha na ndozi efu. Iji ya en n'èzí: na-ewepu ego abụọ kwa ọnwa na-enweghị ọrụ na ATMs na mpụga Spain. N'aka nke ọzọ, ọ na-enye n'etiti uru ya kachasị dị mkpa mkpuchi mkpuchi ịntanetị na nchekwa nchekwa site na ụlọ ọrụ inshọransị. Site na kaadị akwụmụgwọ a, ị ga-enwe mbelata 2% na ọdụ ọrụ nke ụfọdụ ụdị azụmaahịa na enweghị oke ego, na mmanụ na ụlọ ahịa.
N'aka nke ọzọ, na ewepu ego maka oriri, o nwere uru ndị ọzọ nke ụdị kaadị a bụ ego enwere ike inweta, n'etiti 3% na 5%, na ụlọ ọrụ njem, agbụ ụlọ nkwari akụ, ụlọ nri ma ọ bụ ngwaahịa ndị ama ama. ihe maka ọnwa ezumike.
E nwere ọtụtụ kaadị dị iche iche -n’ime usoro kredit ha- na-ahọrọ ịnye nkwalite nke ndị na-ejide ha na-ekere òkè na kwa ọnwa n’oge ọnwa ọkọchị, ebe ego a na-agbata n’ọsọ ga-adaba na kredit ndị ahịa riri.
Akaụntụ maka SMEs n'ịntanetị
N'okwu a, ọ bụ azịza ego maka obere na ndị ọchụnta ego, ndị ọchụnta ego, ndị ọkachamara na ndị ahịa na-enye uru iji jikwaa azụmaahịa ha dịka ịkwụ ụgwọ ozugbo, nchekwa mmekọrịta ọha na eze, ụtụ isi na ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ha; ọ bụ ezie na n’enweghị ileghara ndị ọzọ ọzọ izugbe dị ka mba na-enyefe na ego nkwụnye ego n'efu, sọrụ nke enyemaka iwu na debit na kaadị kredit na-enweghị mmefu ego ọ bụla, tinyere onyinye ndị ọzọ.
N'echiche a, eN'oge ego, ọ bara uru na a ga-enyocha akaụntụ niile sitere n'ahịa ụlọ akụ iji nyochaa ụgwọ maka mmegharị, nsogbu, ego na nnyefe, yana ọrụ nke ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa ndị ọrụ ya, ma jiri ya uru niile nke akaụntụ ahụ gụnyere ndị ọkachamara.
Otu njirimara nke ngwaahịa ndị a na-echekwa ego bụ na ha na-enye ndị na - ejide ha ụgwọ dị elu, n'ọtụtụ dị n'etiti 1,00% na 1,50%, na - enye ohere mmụba karịa 0,75% karịa usoro ọdịnala, nke agbakwunyere na ha anaghị akwụ ụgwọ nlekọta na ndozi.
Ngwaahịa maka imepụta azụmahịa dijitalụ
N'ime onyinye a na-enye ugbu a maka ndị ọchụnta ego, obere ndị ọchụnta ego na ndị ọkachamara, enweghịkwa ụkọ nke ndị agbadoro anya maka ịmepụta ụlọ ọrụ, na-enye ụdị ọzọ onyinye ndị ọkachamara nye ndị na-ejide ha. Nke a bụ ihe gbasara akụkụ dị mma nke ụlọ ọrụ kredit ndị họọrọ ịnye ndị ahịa ha "Akaụntụ Nchekwa Newlọ Ọrụ Ọhụrụ", ngwaahịa nchekwa maka onyinye n'ọdịnihu nke isi obodo maka iwu nke ụlọ ọrụ nwere oke na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, na ime nke a na uru ụtụ isi niile nke iwu dị ugbu a, yana iji nwee uru karịa ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya.
N'okwu a, ọmụrụ nwa nke etinyere bụ 0,50% maka ego ruru ego ruru 50.000 euro, ma bulie ha ruo 0,75% maka nnukwu ego. Ọ naghị atụgharị uche na nkwa ego pere mpe, ma ọ bụ nke oge na nke uru ụtụ dị mkpa, ebe ọ bụ na ego niile a na-abanye n'ime afọ ọ bụla ga-ewepu 15% na nkwupụta ego nke ihe ndị na-esonụ (nke kachasị nke 9.000 euro).
Ọ bụ ezie na, na ntụle, akaụntụ ahụ ekwetaghị ụgwọ ọ bụla, na-enye ohere ịnweta ego n'oge ọ bụla a ga-eji maka ndenye aha nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, nke a ga-eme n'ime oge kachasị elu nke afọ 4 site ụbọchị mmeghe nke akaụntụ ahụ, ya na ihe edere na ndekọ aha ahịa nke otu. Ma ọ bụghị ya, ma maka nzube nke ndokwa na maka oge kachasị elu, ụgwọ ụtụ isi niile ga-efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Paymentgwọ nke azụmahịa kọmputa
Gịnị bụ nnabata ma ọ bụ nnabata web?
Kedu otu esi echedo nchebe iwu na azụmaahịa kọmputa?